နေ့: ဇန်နဝါရီလ 12, 2018
အယ်လ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖုန်းစာအုပ်မှာ Register ကိုသင်မဟုတ်ပါဘူး!
စာအုပ်ပြပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသားများသည်မြေအောက်ရထားများနှင့်မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင်စာအုပ်များဖတ်ရှုခြင်းကိုပျော်မွေ့ခဲ့ကြသည်။ ဖုန်းကိုစာအုပ်ထဲတွင်မထားပါနှင့်။ Adana Metropolitan မြူနီစီပယ်, 11 ။ Çukurova Book Fair လှုပ်ရှားမှုများ [ပို ... ]
ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ receiver Per Antalya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မိုင်အကွာအဝေး
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပြည်သူလူထု၏စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့် Antalya Metropolitan Municipality သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့်လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်သည်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်နှင့် Antalya ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည်ကီလိုမီတာကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်သွယ်မှုအတွက်ငွေပေးရသည် [ပို ... ]
ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံမှု 20-21 ဒီဇင်ဘာ 2017 11 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်၊ ပြည်တွင်းအထူးပြုကော်မရှင်၏ရထားလမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး 12 ဇန်နဝါရီ 2018 [ပို ... ]
ကလေးများ kartepelim လမ်းရထားတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်
Kartepe မြူနီစီပယ်ကလေးများကလပ်သည်ကလေးများပျော်ရွှင်စေရန်နှင့်သူတို့၏အနာဂတ်ကိုထွန်းလင်းစေသည်။ Kocaeli Metropolitan Municipality မှဇွန်လကတည်းကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောAkçarayသည် Kartepeli ၏ကလေးများအားစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ Kartepe မြူနီစီပယ်သတင်းအချက်အလက်အိမ်များ tr [ပို ... ]
TUBITAK-MAM Edirne နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြ ban ၀ န်ကြီးဌာန၊ Edirne မြူနီစီပယ်၊ Edirne သည်ဆူညံသံမြေပုံကိုစတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ တစ်မြို့လုံးပတ် ၀ န်းကျင်ဆူညံသံကိုကာကွယ်ခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောနေရာများကိုကာကွယ်ရန်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆူညံသံ [ပို ... ]
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူအမိန့်အမှတ် 697! ဤတွင်န်ထမ်းများ၏စာရင်း TCDD မှာအလုပျလုပျဖို့ပြန်ရောက်နေသည်
တရားဝင်ပြန်တမ်း၊ TCDD နှင့် TCDD Taşımacılık A.Ş. ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အမှတ် 697 နှင့်အတူ နှင့်TÜVASAŞကို 18 ၀ န်ထမ်းများနှင့်ပြန်လည်လက်ခံခဲ့သည်။ အသစ်ထုတ်ပြန်သောအမိန့်အမှတ် 697 [ပို ... ]
TCDD TaşımacılıkAŞနှင့် DEMARD တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်အာဒဒန်ရှိÇıldırခရိုင်ရှိအက်စ်ကစ်အင်နစ်ကျေးရွာရှိŞehit Taner Karadeniz အလယ်တန်းကျောင်း၌ 11 ကွန်ပျူတာများပါဝင်သည့်သတင်းအချက်အလက်သင်တန်းနှင့်စာကြည့်တိုက်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Ardahan ရှိÇıldırခရိုင်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသည် [ပို ... ]
TCDD ထံမှ5ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်
ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, လွှတ်တော်မေးခွန်းကိုတုံ့ပြန် CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer,5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုဂ္ဂလိကလူမျိုးရေးမှသူသူတို့ကအမျိုးသားရေးကွန်ယက်တွင်သံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ခွင့်လိုင်စင်ရှိသည်သောကြေညာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
YHT တစ်နှစ်တာ Sivas စီးတီးစင်တာတွင်ဖို့နောက်ဆုံး Be မူမည်
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa ApaydınSivas ၌သူ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင် 2018 အကုန်တွင်လိုင်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ YHT ဘူတာရုံသည်မြို့လယ်ခေါင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ [ပို ... ]
ဒါဟာအမြင့်မြန်နှုန်းရထား Nigde ဖြတ်သန်းပါဘူး
CHP နီဂးလက်ထောက်Ömer Fethi Gürerက Kayseri, Nevşehir, Aksaray နှင့် Konya တို့သည်အန်ကာကာနှင့် Antalya ကိုဆက်သွယ်မည့်စီမံကိန်းတွင်အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Ömerကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ [ပို ... ]
Safkar IPO ဆပိုဝယ်လိုအား3မှ
2018 နှစ်၏ပထမဆုံးသောအများပြည်သူအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောပေါက်ပြီးနောက် Safkar ၏အစုရှယ်ယာများသည်လုိုလုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။923.3 သန်းမှအစုရှယ်ယာတူရကီရဲ့ Aegean Soğutmacılık Safka စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc ကိုသန်းပထမ oversubscribed ခဲ့သည် [ပို ... ]
CHP Tanrikulu အဆိုပါယာဉ်ညီလာခံအစီအစဉ်အဘို့အ Metro နူးညံ့မှပယ်ဖျက်
CHP Istanbul လက်ထောက် Sezgin Tanrıkuluသည် Istanbul Metro လိုင်းများသည်ပြည်သူလူထုအားပျက်စီးစေသည်ဟုစွပ်စွဲကာတူရကီ Grand National Assembly သို့သုတေသနအဆိုပြုချက်တင်သွင်းခဲ့သည်။ Tanrıkuluတင်သွင်းသည့်သုတေသနအဆိုပြုချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - Istanbul Metropolitan Municipality ၏မြို့တော်ဝန်ဟောင်း [ပို ... ]
AYM CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက်လိုင်းများလျှောက်လွှာပယ်ချ
Channel CHP စီမံကိန်းသည် Thrace နှင့် Istanbul CHP ကိုထောက်ခံသူများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်စေနိုင်ကြောင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ဇုန်ဥပဒေကထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ “ ရူးမိုက်သောစီမံကိန်း - Kanal Istanbul ulan, 2011 မှဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်၊ [ပို ... ]
အခုတော့ဘူဖေး BUDO Müstecir
အပြောင်းအလဲနှင့်အသွင်ပြောင်းမှုအပေါ် မူတည်၍ Bursa Metropolitan Municipality တွင်စတင်ခဲ့သောပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကွင်းသစ်များထပ်ထည့်သည်။ BURFAŞမှတစ်ခုချင်းစီကိုလည်ပတ်နေသည့်လူမှုရေးအဆောက်အအုံများကိုငှားရမ်းသောမြို့ပြမြူနီစီပယ် [ပို ... ]